“Maaltu Ta’aa jiraa? “Bilxiginnaan Bulchiinsa Magaala Finfinnee Kaabinoota Sadarkaa - Kichuu
HomeAfaan OromooNews“Maaltu Ta’aa jiraa? “Bilxiginnaan Bulchiinsa Magaala Finfinnee Kaabinoota Sadarkaa
“Maaltu Ta’aa jiraa? ==== “Bilxiginnaan Bulchiinsa Magaala Finfinnee Kaabinoota Sadarkaa addaddaarra jiran kanaan dura Lafaa fi mana hin argatin hundaaf Manaa(Condominium) fi Lafa kennuuf Haalduree Xumureera.
Kun dhuguma Dursa hawaasa bal’aa Hiyyyeessa Badhaadhomsuu Osoo hin taane qabeenya Hiyyeessi galmaaee hojii humnaa dalagaa Kondominiyeemii Qusatu Saamuu fakkaatti. Aanaan tokko Giddu galeessaan Kaabinoota Sagalee hin qabne dabalatee Hoggantoota 25 ol qabdi. Hoggantoota Magaalaa fi Kutaalee Bulchiinsa Magaalichaa Osoo hin dabalanne Aanaalee 116 Finfinneen qabdu hundi ni argatan jedhamee itti himamee abdiin itti horameera. Dhugumatti kun faaydaa haalduree Filannichaatiin walqabattuudha. Harkaa bade malee Silaa kun kan tahuu qabu Qonnaan bulaa fi Maatii qonnaan bulaa hiyyummaan jaanjeysitee fi Qeerroo waan mataa keessa seensifatu dhabee Roobaa fi Aduun itti wal jijjiirtuun mala ture. Kan biroo ammoo Hojjattoonni Mootummaa Mindaa gadaanaan Sabasaaniif tajaajijilan wanti giddu galeessa godhatu hin jiru. Daba dalagamaa jiru hunda dunbachuun nama dhibdi. Haa bultu dubbiin.”